Halkan waxaad noqon doontaa kan ugu horreeya ee iskudaya qaabka cusub ee Youtube! | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Naqshadeynta Webka, Dulucda
YouTube-ka cusubi wuxuu imanayaa sannadka 2017! Waana in barta ugu caansan ee shirkadda weyn ee Google loo doortay muuqaal cusub oo ay sameeyeen naqshadeeyayaasheeda. Si loo gaaro isbeddelkan, dhowr sano oo wax ka beddello yaryar ah ayaa laga soo dhaafay xagga sawirka iyo ciyaaryahanka, iyo sidoo kale sanduuqa faallooyinka iyo astaamaha kale ee cusub ee soo ifbaxay.
Barta fiidiyowga ee maalin walba soo saarta balaayiin aragtiyo ah iyo in ka badan seddex meelood meel dadka internetka ku haya guryahooda ay ka diiwaan gashan yihiin, waxay u baahdeen dayactir. Marka laga soo tago Google, ama YouTube, waxay yiraahdaan waa naqshad nadiif ah, oo aan isku qasanayn, sidaa darteed "way fududahay in lagu dhex maro" oo waxay mudnaan dheeraad ah siisaa kanaallada ka muuqda. Sababtoo ah haa, maxaa yeelay way u qalmaan.
Waa wax aan loo baahnayn in la sharaxo, YouTube waxba ma noqon doono, la'aanteedna kumanaan ama malaayiin kanaal oo maalin walba shaqeeya kaas oo ku taageeraya barnaamijka iyada oo loo marayo xayeysiis. Taasi waa sababta ay u maleyn karaan inay u qalmaan taabasho. Si aad uhesho si aad ugu aragto naftaada waa inaad aadaa waxyaabaha soo socda isku xirka oo ku dhufo «Tag YouTube».
1 Falanqaynta isbeddelada qaabeynta
2 Qaabka ... Mugdi!
Falanqaynta isbeddelada qaabeynta
background: Waxaa jira isbeddelo badan oo ku saabsan qaabeynta cusub ee YouTube-ka ah. Mid ka mid ah oo aad u soo jiidasho leh isla marka aad soo gashoba, waa midab. Kahor intaanay ku haynin cawl xagga dambe (R: 241 G: 241 B: 241) si looga garto baloogyada ay ku jirtay. Hadda waxay go'aansadeen inay tirtiraan oo ay ka tagaan hal midab oo sidaas darteed qaab fidsan oo shabakadda ah. Iyadoo la dareemayo yaraan iyo nadaafad.
Cabbirka: Boqolkiiba 100% labada naqshadoodba, muuqaalladu waxay umuuqdaan kuwo caanbaxay. Kahor iyagu xoogaa way ka yaraan lahaayeen hadda oo waxay umuuqdaan kuwo si hordhac ah loo keenay. Wax yar oo xallin yar laga yaabo inaanay soo jiidasho badan lahayn, oo lagu saleeyo. Waxay sidoo kale bedeshaa cabirka fiidiyowyada, gabi ahaanba qabsashada shaashadda, haa, maahan fiidiyaha.
guddi: Kahor gudiga midigta ayaa si otomaatig ah u soo muuqan lahaa kaliya hadii kalfadhigii ugu dambeeyay uu sidan ku sii ahaan lahaa, hada markasta wuu muuqdaa Waana inay noqotaa maxaa yeelay saddex walxood ayaa xaga hore ka muuqday: «Guriga». "Isbeddellada". "Diiwaangelinta". Hadda waxay u muuqataa oo keliya guddiga isticmaalaha bidix.
Sidoo kale waa inaan idhaahdaa waxay ku jirtaa geeddi-socodka isbeddelka, laga yaabee in muuqaalada qaarkood ay gadaal ka soo muuqan doonaan
Isticmaalayaasha: Sidii aan horayba u sheegay, sida ay iyaga leeyihiin, adeegsadayaashu hadda muhiim ayey u yihiin qaabkan cusub. Laakiin, anigu sidaa uma arko. Mid ka mid ah astaamaha aan rajeynayo inay ku daraan wixii ay lahaan jireen ayaa ah in jiirka dusha laga saaro a youtuber oo arag horudhac kanaalkaaga. Sida ay tahay muuqaalkaaga iyo sawirkaaga asalka ah, macaamiisha iyo macluumaadkaaga dheeriga ah.
Sanduuqa macluumaadka dheeraadka ah: Halkaan waxaa kajira isbadal aad uqurux badan, waana hadii aad sifiican usheegto cida sameysay fiidiyowga (marka laga hadlayo video clips), yaa soo saaray ama kaqeyb qaatay, mar dambe uma muuqaneyso mid fudud oo ay qortay qoraaga. Hadda waxay umuuqan doontaa mid xirfad leh oo si habeysan loo abaabulay. Waa wax aan u baahanahay waxayna umuuqataa mid sax ah.
Qaabka ... Mugdi!
In ka badan wax ka beddelka naqshadeynta si loogu dhowaado waqtiyada cusub, qaabka mugdiga ahi waa muuqaal gebi ahaanba ka duwan. Wax ay in badan rajaynayaan ayaa rumoobay. Mararka qaarkood, waxaan ku jirnaa xaalado, in midabka cad uu ka xanaajin karo dadka kale ama naftaada. Tani waa sababta habka mugdiga ahi u ahaa lagama maarmaan.
Dhamaan kuwa aan arkin, waxaan siinayaa tusaale: Qiyaas inaad tareen ama bas raacayso habeenkii oo ay jiraan dad badan oo hurda. Haddii aad leedahay qaab mugdi ah, iftiinka uu laptop-kaaga ka turjumi doono ma noqon doono mid ku soo dhaca madow sida haddii aad ku qaadatid midab cad. Waxay ku jirtaa xaaladaha noocan ah halka ay waxtar leedahay. Dad badanna hubaal way ku qanacsan yihiin.
Si aad ugu bedesho hab mugdi ah, u gudub qeybta cusub ee isticmaaleyaasha ee YouTube kuu diyaarisay. Halkee ka hor intaadan beddeli karin isticmaale oo aad ka bixi kartaa, hadda wax badan waad qaban kartaa. Sida qaab mugdi ah, luqad ama marin xaddidan, iyo kuwo kale. Halkaas waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka 'Moodow Mugdi: Maya' oo u beddel haa. Xusuusnow haddii aad bedesho kombuyuutarkaaga ama xitaa biraawsarkaaga, waa inaad mar labaad dhaqaajisaa habka mugdiga ah.
Waxaa jira sababo ku filan oo looga beddelo YouTube-ka isla markaana looga saaro dhammaan geesaha barxadda si loo helo warar cusub, Maxaad sugeysaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Halkan waxaad noqon doontaa kan ugu horreeya ee iskudaya qaabka cusub ee Youtube!